I-Cnc Router, i-Fiber Laser Cutting Machine, i-Laser Machine - i-DADI CNC
Umshini wokusika we-Metal Sheet Fiber laser
Umshini wepayipi wokusika i-fiber laser
Umshini wokumaka we-laser wefibre
Umshini Wendlela We-CNC
Umshini wokusika nokuqopha we-CO2 laser
3 Axis 4 Axis 6090 CNC router umshini
Umshini we-router we-CNC 1530 ngetafula le-Aluminium T-slot
Umshini we-DADI CNC router Machine 1325 nge-Aluminium T-sl ...
Umshini wokumaka we-Mini Fibre Laser 20W, 30w, 50W
1325 CNC router umshini Stone zemabula Jade g ...
1325 ukhuni Milling umshini PCB Izinkuni Acryl millin ...
Umshini we-Fibre Laser Cutting DA 3015T
I-CO2 Laser Engraving and Cutting Machine 1390/16...
I-Shandong DADI CNC Equipment Co., Ltd.is ingumkhiqizi oqeqeshiwe womshini we-CNC ROUTER nomshini we-CNC Laser. Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi ku: umkhakha wokukhangisa, umkhakha wokhuni, imboni yamatshe, imboni yefenisha, imboni ye-aluminium yekhethini lokuhlobisa udonga nezinye izimboni.
Ukusika Incwadi Nge-LED
umbhalo oqoshiwe wensimbi
laser umshini isampula
Likuphi uhla lwethu lwebhizinisi: kuze kube manje sesisungule amasistimu ama-prosy agent e-USA, Russia, Canada, Finland, United kindom, Italy, Bulgaria, Thailand, Pakistan, Indian, Malaysia, Korea, Austrilia, futhi naseMpumalanga Ephakathi naseNingizimu Melika , I-Afrika njll, sinomlingani nenani elikhulu lamakhasimende.
Iyiphi igesi esetshenziselwa umshini wokusika we-fiber laser, umoya-mpilo noma i-nitrogen?
Hlobo luni motor lokuphotha kufanele isetshenziselwe itshe lokuqopha umshini, futhi imuphi amandla umhlabeleli?
Ukuhlaziywa okudingekayo komshini wokubaza umshini we-servo motor nge-reducer, iWhatsapp: 0086-159-660-556-83
Ukusetshenziswa kwesinciphisi kuyadingeka kakhulu kumshini wokuqopha i-CNC okhuni obekade ...
IShandong DADI CNC Mechanical Equipment Co., Ltd.